Weriye U Dhacay Shir Xasaasi Ah Oo Ay Lahaayeen Wasiirada Difaaca Ee Yurub Xogo Xasaasiyana Ka Helay – Borama News Network
Weriye U Dhacay Shir Xasaasi Ah Oo Ay Lahaayeen Wasiirada Difaaca Ee Yurub Xogo Xasaasiyana Ka Helay
Weriye u dhashay dalka Netherlands ayaa galay shir hab fogaan arag ah oo ay lahaayeen wasiirada difaaca ee midowga Yurub.
Shirkan oo ahaa mid qarsoodi ah aya Daniel Verlaan oo katirsan warbaahinta RTL Nieuws waxaa uu galay shirka kadib markii wasiirka difaaca ee dalka Netherlands ay si lama filaan ah xogta iyo nambarada sirta ah ee shirka usoo dhigay barta ay ku leeyahay Twiter-ka.
Shirkan oo ahaa mid arag ah ayaa markii uu soo galay shirkii socday waxaa uu gacanta u taagay wasiiradii ku jiray shirka.
” Ma ogtahay in aad soo gashay oo aad kusoo dhex dhacday shir sir ah?” ayuu yiri madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub, Josep Borrell oo shirka ku jiray.
Weriyihii ayaa markii lala hadlay waxaa uu cudur daar ka bixiyay shirka uu iska soo galay, waxaana u yiri “Haa, waan ogahay, waana ka xumahay. Waxaan ahay weriye u dhashay Netherlands, waana ka xumahay in aan idin kasoo dhexgalay shirka,” ayuu ku jawaabay weriye Verlaan oo dhoola caddeynayay.
Waxaa uu mas’uuliyiintii shirka ka qeybgalayay uu u sheegay in uu ka baxayo kadib markii Borrell uu u sheegay inay u wanaagsan tahay in uu shirka isaga baxo kahor inta aanan loogu wicin booliiska, maadaama sida uu hadalka u dhigay ay tahay arrin khalad ah.
Weriye Verlaan ayaa dib laga ogaaday in shirka uu galay ay u sahashay wasiirada difaaca ee dalka Netherlands, Ank Bijleveld oo baahisay sawir uu ku jiro xogta sirta ah ee shirka lagu galo.
Arrintan ayaa bannaanka soo dhigtay walaac holeh iyo su’aalo dhowra ah oo la xiriira badqabka shirarka xasaasiga ah ee fogaan aragga ah ee ay yeelanayaan madaxda midowga Yurub.
Shirkii wasiirada difaaca ayaa la sheegay in lasoo gabagabeeyay maadaama loo dhacay shirka, waxaana afhayeenka gollaha midowga Yurub uu sheegay in arrinta weriyaha uu ku dhaqaaqay ay tahay “xadgudub”, laguna wargelin doonaa dadka ay khuseyso.
Wasaaradda difaaca ee Netherlands ayaa sheegtay in xogta shirka ee la baahiyay ay ahayd khalad weyn oo dhacay.
Gudoomiyaha Aqalka Sare Iyo Cabdikariin Guuleed Oo Kulan Xasaasiya Ku Yeeshay Muqdisho
Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Dalka Itoobiya Iyo Boqortooyada Sucuudiga Oo La Heshiisay Turkiga
Ogaw 7 Qodob Oo Ku Saabsan Awooda Ciidanka Dalka Shiinaha
Milatariga Turkiga Oo Hareereeyay Ciidamo Faransiis Ah İyo Qodobo Kale
Bnnstaff Bnnstaff March 22, 2021 March 21, 2021
Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Xiisada Ka Taagan Xuduuda Itoobiya Iyo Sudaan Iyo Sudaan Oo Ciidamo Badan Gaysay Xuduuda